Xiaomi Mi Xusuusin 10: Dhammaan faahfaahinta ku saabsan kamaradaha taleefanka | Androidsis
Toddobaadkan waxaa la xaqiijiyay in Xiaomi Mi Note 10 waa taleefan dhab ah y taas ayaa imaan doonta waqti dhow. Shalay ayaa ugu dambeyntii la muujiyay in soo bandhigida qaabkan Waxay Noqon laheyd Nofeembar 12 Yurub. Markaa waa aalad ay dad badani xiisaynayaan oo aan ugu dambayn awoodi doonno inaan ogaanno. Qalab u muuqan doona kaamirooyinkiisa.
Kaamirooyinka qaar oo aan ugu dambeyntii haynay dhammaan faahfaahinta. Laga soo bilaabo wixii aan ka arki karno in Xiaomi Mi Note 10 uu noqon doono tusaale si fiican uga dhex muuqan doona arrintan. Shan kamaradood oo gadaal ah, oo uu kabtanka u yahay 108 MP shidma weyn ee kiiskan. Waa yaabe yaab.
Xiaomi Mi Note 10 waa taleefankii ugu horreeyay ee suuqa ku yaal shan kamaradood oo gadaal ah iyo 108 MP shidma weyn. Kaliya maahan dareemahan weyn inuu muhiim yahay, maadaama afarta dareemayaal ee kale ay sidoo kale muhiim u yihiin taleefanka sidan oo kale ah. Marka waxaan heleynaa isku dhaf iyo natiijooyin fiican markaan sawir qaadno.
Dareemaha ugu weyn ee taleefanka ayaa ah 108MP ISOCELL Bright HMX cabirkiisuna yahay 1 / 1.33 inji iyo pixel kasta wuxuu cabirkiisu yahay 0,8 μm. Dhinaca kale, waxaan leenahay 5 MP zoom sensor, oo na siin doonta ugu badnaan ugu badnaan 50x, in kasta oo xaaladdan ay noqonayso mid dijitaal ah. Soo dhaweynta indhaha ayaa noqon doonta 5x iyo 10x isku dhafan.
Dhinaca kale, Xiaomi Mi Note 10 wuxuu leeyahay 12 MP a sensor sensor, oo ah Samsung S5K2L7 kiiskan. Maxaa intaa ka badan, xagal ballaaran oo 20 MP ah ayaa lagu daray, taas oo ballanqaadaysa inay ka sarreyso kuwa kale xallinta. Waa dareeraha Sony IMX350 ee ay shirkaddu dooratay. Dareemaha ugu dambeeya waa 2 MP makro sensor, kaas oo aan ka heli karno illaa 1.5 cm sheyga su'aasha.
Sidaa darteed waxaan arki karnaa in Xiaomi Mi Note 10 uu noqon doono mid ka mid ah taleefannada ugu caansan dhanka sawirka ee Android. Marka waxaan rajeyneynaa soo bandhigida qalabkan, lagu qaban doono bisha Nofeember 12 dalka Poland. In kastoo ay dhici karto dhacdo kale oo soo bandhigid ah dhowaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Kaamirooyinka Xiaomi Mi Note 10 oo faahfaahsan
Codsiga lagu maareeyo barnaamijkeenna Android-ka ee Windows-ka, Saaxiibka taleefankaaga, wuxuu baabi'inayaa taageerada bluetooth-ga